Home News Bankiga Dhexe oo laga digay in loo gacan geliyo Shaqsi Ajnabi...
Bankiga Dhexe oo laga digay in loo gacan geliyo Shaqsi Ajnabi ah!!
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo katirsan Xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka digay qorshaha wax ka badelka lagu sameenayo sharciga Bangiga Dhaxe si dad ajaaniib ah madax looga dhigo.
” Beecgeynta Bangiga Dhaxe waa mashruuc bilowgiisa aan aragno laakiin dhamaadkiisa cidi aysan ogeyn! Maxaa xikmad ah oo kujira in xiligaan shuruucda dalka loo badalo nin AJNABI ah si loogu dhiibo Bankiga Dhaxe oo ah hay’adda ugu saraysa ee maamusha dhaqaalaha dalka? Maxaa looga cararayaa muwaadinka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka wadaniga ah, laguna doortay nin AJNABI ah oo cilmi maaliyadeed aan baran. Shaqo maaliyadeedna aan soo qaban sida CV-giisa ka muuqata? Mise waxaa jira qorsheyaal kale oo naga qarsoon oo in aan ogaanana hada aysan muhiim ahayn?! Ayuu isweediiyay Xildhibaan Mahad Salaad.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa hadii wax ka badal ku sameeyaan sharciga Bangiga Dhaxe waxa ay meesh ka saareesaa sharcigii hore u diidayay in Bangiga Dhaxe ee Soomaaliya madax ka noqdaan dad ajanaiib ah.